I-glaucoma ibizwa ngokuthi isifo iso lapho kukhona ukwanda oluqinile ingcindezi intraocular. Odokotela ukwabelana yayo zamabanga aphansi naphezulu. Etiology lokuqala bengayiqondi ngokugcwele, kanti eyesibili selivela kwetintfo ezihlukahlukene izifo ezahlukene: isimila ocular, iridocyclitis nabanye abaningi.
I-glaucoma: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa
Iso lomuntu lenziwe njalo balondoloza ingcindezi ethile. Lokhu kuyofezeka ezinyakazayo njalo uketshezi ngaphakathi inhlamvu yeso. Uma lokhu izifo iso ezifana ukufiphala kabani izimpawu kuyashesha ngokwanele, lokhu kwegazi kuyaphazamiseka, kanti ngenxa yalokho ukwanda ingcindezi. Emsipheni optic iqala ukuzwa i umthwalo yanda, futhi kukhona ukuphazamiseka kokuphakelwa kwegazi. Ngenxa yalokho lezi zinguquko ezivela amasignali iso kuphele ukungena ingqondo. Okokuqala, sikhonjiswa kuphela ukulahlekelwa elincane umbono, kodwa ke elahlekile umbono neuropathy futhi kakhulu kwanciphisa ukubonakala zone. Uma lesi sifo zingelashwa, kungaba kwenzeke ubumpumputhe ngokwengxenye noma ngokuphelele. Ukubaluleka kwalesi sifo kuqinisekiswa ukuthi bonke ezenzeka esikhathini izinguquko ehlweni engelapheki. Izimpawu ze-glaucoma iso uvumele ulwahlukanise kumafomu ezimbili: evulekile bese Ukuvalwa. Esimweni sokuqala, uketshezi iqala buthelela ngenxa yokuthi iso iris iqala ukuthi liphazamisane amanzi zemvelo, kanti eyesibili - ngenxa kokunikezwa kwe-isimiso sokukhuculula.
I-glaucoma - Izimpawu kanye nemithi
I-glaucoma uvamise ukwelashwa nge-ukusetshenziswa kwezidakamizwa ekhethekile, okuvumela ukunciphisa yokucindezela uketshezi ngaphakathi kwamehlo lesiguli. Nokho, le ndlela has nokushiyeka sina. Okokuqala, ukusebenza ukusetshenziswa eside kwezinye izimali kungase kakhulu ziyancipha ngenxa ithonya omzimba omuntu futhi ekhonweni lomzimba lokukwazi ukujwayela cishe noma yini. Ngemva kwesikhathi esithile isidingo ukwandisa umthamo umuthi nomthelela ongemuhle isiguli. Futhi, amalungiselelo ekunciphiseni ingcindezi, ngokuvamile konakalise kwegazi iso futhi neqhaza ekuthuthukiseni esweni. Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi uHlelo imithi alubuqedi isizathu ukuthi kukhona ukufiphala izimpawu ziyasuswa, kodwa le ndlela alisilungele ekwelapheni.
I-glaucoma, okuyinto kakhulu ukunciphisa izimpawu umbono lesiguli, avame ziphathwe imisebenzi ekhethekile lapho udokotela yakha izindlela ezintsha outflow uketshezi kusukela inhlamvu yeso - non-ezijulile okujulile scleroticectomy sclerotomy. Isici wokuqala Kuyaphawuleka ukuthi ukuhlinzwa okwenzeka ngaphandle kokungenela koda, okuyinto kakhulu kunciphisa ingozi yokuthola ahlukahlukene futhi cishe kabili sifushanise yokutakula nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa. Endabeni ka-engeli-Ukuvalwa glaucoma sisetshenziswa operation iridectomy ukuthi ihlose ukuthuthukisa nokusakazwa uketshezi phakathi emakamelweni yeso. Inkinga eyinhloko nale kwelashwa umthamo enamandla kakhulu okuzivuselela yomzimba, ngenxa yalokho kungadalwa ngokushesha cicatrize amanzi endleleni oyoletha imizamo yodokotela ababhubhayo.